काे हुन् टिकटकमा सबैभन्दा बढी फलाेअर भएकी यी युवती ? कति छन् फलाेअर - DURBAR TIMES
HomeEntertainment & Artsकाे हुन् टिकटकमा सबैभन्दा बढी फलाेअर भएकी यी युवती ? कति छन्...
काे हुन् टिकटकमा सबैभन्दा बढी फलाेअर भएकी यी युवती ? कति छन् फलाेअर
पछिल्लाे समय भिडियाे शेयरिङ एप टिकटक विश्वभरि नै निकै चर्चित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले याे एपलाइ प्रतिबन्ध लगाउने खबर आएपछि झनै यसकाे लाेकप्रियता चुलिँदाे छ । तर अमेरिकाकै एक युवती जाे टिकटकमा सबैभन्दा बढी पछ्याइएकी व्यक्ति बन्न सफल भएकी छिन् ।
१६ वर्षीया टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति बनेकी छिन् र याे टिकटककाे इतिहासमा सबैभन्दा बढी फलाेअर भएकाे अकाउन्ट हाे । टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने चार्ली डिमेलियो अमेरिकी नागरिक हुन् । चार्लीले झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा नै यो उपलब्धि हासिल गरेकी हुन् ।
Previous articleबर्दिबासमा गाेली चल्याे एक घाइते
Next articleनमस्ते भन्ने कि नमस्कार ?
टिकटक बनाई जित्नुहोस पुरस्कार
मिस्टर एन्ड मिस टिकटक हुने
अमेरिकामा पनि टिकटक प्रतिबन्ध